BORIC ACID INDHAHA: TILMAAMAHA LOO ISTICMAALO, SIDA LOO XALIYO XALINTA GURIGA LAGU DHAQO, TAAS OO KA SII FIICAN - DAAWOOYINKAAN AMA DHIBCO INDHAHA LOO DIYAARIYAY? - WIXII MARTIDA
Boric acid waa walaxda firfircoon ee qaabka budada kiniinka aan lahayn. Waxaa si fiican loo kala diraa dareere kasta. Daroogadan waxaa badanaa loo isticmaalaa daawada dhaqameedka si loogu isticmaalo hababka kala duwan ee xubnaha aragtida.
Daroogada ayaa muddo dheer loo isticmaalay jeermiska. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo boric acid taxadar leh, sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay aqoonsadeen dabeecadaha kale ee ka yimaada saameynta xalkan. Maqaalkani waxaad ku baran doontaa in aad indhaha ku maydhan karto xalkan iyo sida loo xoqdo boric acid si loo dhaqo.
Halkii, waxaa hadda loo isticmaalaa xardhexaadiyaha iyo bararka xuubka xabka ee isha. In kastoo ay jirto cabsida, isticmaalka daroogada si loo dhaqo indhaha waa la oggol yahay. Waxay daaweeyaan ileyska indhaha iyo indhaha ah ee geeddi-socodka bararka.
Daawadani waxaa lagu gartaa saameyn lid ku ah antifungal iyo antifungal, sidoo kale waxay leedahay saamayn cayayaanka.
MUHIIM AH OO AAD OGAATO! Qeybtaani waxay burburisaa borotiinka heerkulka gacanta oo isbeddelaya kala-soocidda maadooyinkaas. Waxaa si fiican u nuugay maqaarka iyo xuubka xuubka.
Boric acid waxaa si fudud loo nuugo unugyada xubnaha unugyada gudaha. oo wuxuu ku dhex firdhiyaa iyaga. Waxay ka baxaysaa jirka si qunyar ah, tusaale ahaan, kala bar nuska xalka lakulmay ayaa laga soo riday, kelyaha ka dib 12 saacadood, qaybta inteeda kale waa la sii daayaa todobaad gudaheeda.
Sababtoo ah xuubka xuubka ayaa lagu kala duwan yahay xanaaq badan, indhoolaliyayaashu waxay kugula talinayaan isticmaalka xalal aqueous ah.
Daroogadani waxay faa'iido u tahay xanuunka 'conjunctivitis', laakiin waxaa suurtogal ah in lagu aaso guriga marka kaliya la tashanayo indhaha.
Haddii ay dhacdo in lagu duro 1-2 dhibcood oo hal il ah, xanuunku wuxuu hoos u dhacayaa 2-3 maalmood. Xaaladdan oo kale, daroogada ayaa la isticmaali karaa illaa dhammeystirka soo kabashada.
Maxay ka fiican tahay: xalka ama dhibcaha indhaha?
Waxay u egtahay in jawaabta su'aashan la mamnuucay ay tahay mid aan caadi ahayn - dabcan, dhibcaha indhaha. Laakiin waxaa jira xaalado marka isticmaalka daaweynta dadweynaha, iyo diyaarinta boric acid, gaar ahaan, waa mid ku haboon.
Marka caabuqa gudaha godka gudaha ee indhaha, xalka boric acid waxaa loo isticmaali karaa saameyn weyn marka loo eego isticmaalka qaar ka mid ah dhibcaha indhaha.
"Okapin" - dhibcaha indhaha, hadda xal aad u caan ah, waxaa lagu xayeysiiyaa internetka, warbaahinta iyo xataa xitaa cadaadiska.
Laakiin si aad u iibsato daroogada dhabta ah, oo aan ahayn been abuur, farmashiistayaashu waxay ku talinayaan in ay codsadaan bogga rasmiga ah ee Api Fitopharm. Waxaa jira dhalo ah 10 ml ah 640 raqiis.
Sicirka waa mid sare, laakiin waxaa jira xulasho kale - zinc sulfate dhibcood indhaha. Marka lagu daro bogga farmashiyaha ee kor ku xusan, xalkan waxaa laga heli karaa farmasiyada iyo ilaha kale ee rasmiga ah, sida Proglasa.ru, Fitomaks.ru.
Waxaa lagu soo saarayaa tuubo 5 ml ah oo qiimaheedu ka yaryahay 160 RUB, taas oo ku xidhan feejignaanta. Badanaa dhibcaha indhaha waxaa lagu iibiyaa qiyaasta 0.1, 0.25 ama 0.5% zinc sulfate iyo 2% boric acid.
Si aad u bilowdo, tixgeli sida loola socdo Halabuurka:
Si aad u hesho xal laba-boqolkiiba oo ah asiidh indhaha, waa in aad marka hore diyaariso foornada, marka la door bido khadadka miisaanka. Biyo raaci oo raaci.
Ku shub 2,4 garaam oo boric acid ah dhalada qiyaasta oo ku dar 120 ml oo biyo ah karkaraya. Isku dar waligaa si fiican.
Markaad isticmaasho daroogada noocan oo kale ah, habkan waxaa lagu sameeyaa adigoo saaraya qayb ka mid ah suufka oo lagu qooyey xalka indhaha oo xiran, oo leh qayb ka mid ah tampon isha kasta.
Doorashada daawooyinka diyaar ah
Boric acid waa walax shucaac ah. Iyo sidoo kale Zinc Sulfate, oo loo isticmaalo dhibcaha indhaha, badeecadani waxaa lagu nuugaa inta ugu yar.
Tanna, tan oo kale, waxay leedahay saameyn faa'iido leh ee xuubka xuubka isha oo ma keeno saameyno, taas oo suurtogal ah in ay suurtagal tahay isticmaalka goonida ah ee xalahan.
MUHIIM! Dareemadan indhaha waa kuwo wax ku ool ah oo kor u qaada soo kabashada.
Suurtogal ma tahay in la nadiifiyo carruurta?
Ilaa hadda, ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan baaritaannada lagu sameeyo carruurta da'doodu ka yar tahay siddeed iyo toban sano jir. Taa waxaa loola jeedaa, oolistayaasha looma oggola inay kugula taliyaan daroogada daaweynta ee da 'kooxdan, sababtoo ah waxay leeyihiin sababo aan la taaban karin, qaabka suurtogalka ah ee fal-celinta sunta ah ayaa kordha.
Bukaannada qaangaarka ah ka hor isticmaalka waa in:
Gacmaha si fiican ugu dhaq saabuun kadibna daaweyn antiseptic.
Ka dibna si taxadar leh u fur tubbada sida ku qoran tilmaamaha ku lifaaqan.
Xiro qulqul fidiyaha iyo hal ama labadii dhibcood u gudub indhaha geeska indhaha. Si arrintan loo sameeyo, madaxa waa in la mariyaa dhabarka oo u jeedaa dhinaca si ay dhibcaha hoos ugu dhacaan gudaha isha, halka indhaha hoose ee la jiido.
Xalka waxaa lagu dabaqaa nasasho 12 saacadood subaxdii iyo habeenkii. Waxaad ku dhigi kartaa tuubo furan laba toddobaad.
Marka daroogada xitaa haddii uu jiro:
dheecaan daahir leh;
hyperemia ee xuubka xabka.
Muddada daaweynta waxay ku xiran tahay nooca cudurka, sida caadiga ah, daaweyntu waxay socotaa 7 maalmood. Waa in maskaxda lagu hayo in daaweynta ay tahay mid xirfad leh. Marka la magacaabayo dhibco, oculist wuxuu tixgeliyaa hantidooda.
Xaalado gaar ah waxay dhacdaa:
Dad badan ayaa qaba cudurka indhaha inta ay noolyihiin. Taas macnaheedu waa in dhibaatooyinka badankood laga hortagi karo caawimaadda tallaabooyinka ka hortagga ah.
Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
Si joogto ah ayaa loo maraa baaritaan caafimaad oo uu ku sameeyo dhakhtarka indhaha. Waxay go'aaminayaan dhammaan cudurrada indhaha marxaladda hore, taas oo ka hor tagi doonta horumarinta waqtigeeda.
Nafaqada haboon. Waxaad u baahan tahay inaad cuntid cuntooyin leh saameyn ku leh caafimaadka indhaha. Waa lagama maarmaan in lagu daro cuntooyinka noocaas ah, taas oo ku jiri doonta fiitamiinada A, C iyo E.
Ka dhig dhererka. Ma aha sir ah in miisaanka culus uu saameyn xun ku yeesho tayada aragga, maaddaama xaalad sidan oo kale ah cadaadiska saaran xididdada dhiigga ee bixiya dhiiga indhaha. Haddii aan xisaabta ku darno in ay aad u yar yihiin, ka dibna, si waafaqsan, waxay si sahlan u dhaawacmi karaan.
Waxaa intaa dheer kuwa lagu xusay, waxaa jira dhowr xaaladood oo kale oo khasab ah oo looga hortago cudurrada indhaha, kuwaas oo:
nasasho ku filan;
isticmaalka muraayadaha qoraallada;
Iyadoo la raacayo tallaabooyinkan kahortagga fudud, cuduro indhaha oo badan ayaa laga hortegi karaa, iyo haddii dhacdo, waxaad si guul leh u yareeyn kartaa horumarkooda. Ka taxadar indhahaaga.